Olee Otú Jizọs Si Azọpụta Anyị?
GỤỌ NKE Abkhaz Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Azerbaijani Baoule Bashkir Batak (Toba) Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Georgian German Greek Greenlandic Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabuverdianu Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Mauritian Creole Maya Mingrelian Mongolian Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi (Shahmukhi) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Réunion Creole Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Quiatoni) Zulu
Jizọs zọpụtara ụmụ mmadụ kwesịrị ntụkwasị obi mgbe o ji ndụ ya chụọ àjà. (Matiu 20:28) Ma, Baịbụl kpọrọ Jizọs “Onye Nzọpụta nke ụwa.” (1 Jọn 4:14) O kwukwara, sị: “Nzọpụta adịghịkwa n’onye ọ bụla ọzọ, n’ihi na aha ọzọ adịghị n’okpuru eluigwe nke e nyere ụmụ mmadụ, nke a ga-eji zọpụta anyị.”—Ọrụ Ndịozi 4:12.
Jizọs ‘detụrụ ọnwụ ire maka mmadụ niile’ nwere okwukwe na ya. (Ndị Hibru 2:9; Jọn 3:16) N’ihi ya, “Chineke si ná ndị nwụrụ anwụ kpọlite ya,” ya alaghachi n’eluigwe dị ka mmụọ e kere eke. (Ọrụ Ndịozi 3:15) Mgbe Jizọs ruru ebe ahụ, o nweziri ike “ịzọpụta ndị ahụ n’ụzọ zuru ezu bụ́ ndị na-abịaru Chineke nso site na ya, n’ihi na ọ na-adị ndụ mgbe niile ịrịọrọ ha arịrịọ.”—Ndị Hibru 7:25.
Gịnị mere o ji dị anyị mkpa ka Jizọs rịọchitere anyị arịrịọ?
Anyị niile bụ ndị mmehie. (Ndị Rom 3:23) Mmehie mere ka anyị na Chineke ghara ịdị ná mma, na-akpatakwara anyị ọnwụ. (Ndị Rom 6:23) Ma, Jizọs bụ ‘onye na-ekwu ọnụ ndị niile nwere okwukwe na ya.’ (1 Jọn 2:1, Bible Nsọ nke Union Version) Ọ na-ekwuchite ọnụ ha, na-arịọ Chineke ka ọ nụ ekpere ha ma gbaghara ha n’ihi àjà Jizọs ji ndụ ya chụọ. (Matiu 1:21; Ndị Rom 8:34) Chineke na-eme ihe ahụ Jizọs rịọchiteere anyị n’ihi na ha kwekọrọ n’uche Ya. Chineke zitere Jizọs n’ụwa “ka e wee site n’aka ya zọpụta ụwa.”—Jọn 3:17.
Ọ̀ bụ onye kwerehaala na Jizọs a zọpụta ya?
Mba. Ọ bụ eziokwu na anyị kwesịrị ibu ụzọ kwere na Jizọs tupu enwewe ike ịzọpụta anyị. Ma, e nwere ihe ọzọ dị mkpa. (Ọrụ Ndịozi 16:30, 31) Baịbụl kwuru, sị: “Dị ka ahụ́ nke na-enweghị mmụọ bụ ihe nwụrụ anwụ, otú ahụkwa, okwukwe nke na-enweghị ọrụ bụ ihe nwụrụ anwụ.” (Jems 2:26) Ka e nwee ike ịzọpụta anyị, anyị kwesịrị:
Ịmụta gbasara Jizọs na Nna ya, bụ́ Jehova.—Jọn 17:3.
Inwe okwukwe na ha.—Jọn 12:44; 14:1.
Irubere ha isi iji gosi na anyị nwere okwukwe na ha. (Luk 6:46; 1 Jọn 2:17) Jizọs kwuru na ọ bụghị onye ọ bụla na-akpọ ya “Onyenwe anyị” ka a ga-azọpụta, kama ọ bụ naanị ndị “na-eme uche Nna [ya] nke nọ n’eluigwe ga-aba na ya.”—Matiu 7:21.
Ịnọgide na-egosi na anyị nwere okwukwe n’agbanyeghị nsogbu ndị anyị na-enwe. Jizọs mere ka nke a doo anya mgbe o kwuru, sị: “Onye tachiri obi ruo ọgwụgwụ ka a ga-azọpụta.”—Matiu 24:13.
Jizọs Ihe Mmadụ Kweere na Otú E Si Efe Chineke Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Mmadụ Ịsị “Ekweere M na Jizọs” Ọ̀ Bụ Naanị Ya Ga-eme Ka A Zọpụta Ya?
Baịbụl kwuru na e nwere ndị kweere na Jizọs ma a gaghị azọpụta ha. Gịnị kpatara ya?
Baịbụl Ọ̀ Na-akụzi na ‘A Zọpụtahaala Mmadụ, A Zọpụtachaala Ya’?
Jizọs mere ihe atụ zara ajụjụ ahụ.
Olee ihe ndị na-eme ka otu onyinye baa uru karịa ibe ya? Ichebara ihe ndị ahụ echiche ga-eme ka anyị jiri ihe mgbapụta ahụ kpọrọkwuo ihe.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Olee Otú Jizọs Si Azọpụta Anyị?
ijwbq isiokwu 140
Gịnị Mere Jizọs Ji Nwụọ?
Olee Otú Ị Ga-esi Enweta Ndụ Ka Mma?